Dhinacyada Ku Dagaalamaya Ethiopia Oo Kala Sheegtay Guulo Milatari | Berberatoday.com
Dhinacyada Ku Dagaalamaya Ethiopia Oo Kala Sheegtay Guulo Milatari
Addis Ababa(Berberatoday.com)-Hoggaamiyeyaasha Gobolka Tigrayga ee dalka Ethiopia ayaa ku gacan saydhay inay isku dhiibaan ciidamada federalka, taa badalkeedanay waxay sheegeen inay ku guulaysanayaan dagaalka maanta oo Arbaca ah.
Ciidamada gobolka Tigrayga ee TPLF ayaa sheegay inay jabiyeen cadowga, sida ay hadalka u dhigeen, shacabkooduna aanay jilbaha dhulka dhigi doonin ama isdhiibi doonin, maalin ka dib markii ciidamada dawlada Ethiopia ay duqayn ku bilaabeen caasimada gobolka Tigrayga ee Mekelle, ciidamo tiro badana ay soo dhoobeen dhinaca dhulka.
Hase yeeshee masuuliyiinta Tigrayga ayaa maanta sheegay in gobolka Tigraygu uu cadaab ku noqon doonto cadowga. Dagaalkan culus ee ka socda dalka Ethiopia oo ay ku barakaceen tiro lagu qiyaasay 30,000 qof oo Tigray ah ayaa galay dalka Sudan sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Maalintii shalay ayay ahayd markii Raysal Wasaaraha dalka Ethiopia uu sheegay in ay dhamaatay saddexdii maalmood ee loo qabtay masuuliyiinta iyo Ciidamada Tigrayga, isla markaana ay bilaabayaan gulufkii ugu dambeeyey ee lagu horkeeni lahaa sharciga.